1 février 2021 – Madatopinfo
FANATSARANA HATRANY IFOTONY AN’NY ZAIMAIKA : «Narodana tanteraka ny tafo vaovao noho ny rindrina mangozohozo » “Indro havaoziko ny zavatra rehetra!”. Io no mahalaza ny fanamboarana tanteraka hatrany ifotony indray ny trano fivarotana hani-masaka eo Ambodifilao. Araka ny fampitam-baovaon’ny tomponandraikitra mpanangana indray an’ny Zaimaika Analakely, na...
ZAIMAIKA ANALAKELY : Mizotra fehizay ny fanitaran’ny Miel ny trano avo lenta Raitra ! Io no filaza azy raha ny fahitana ny sarin’ny Zaimaika ho avy eo. Avo lenta tokoa ny fanalehibeazana sy ny fampiakarana ary ny fanatsarana ity trano fisakafoanana eo...
FIRAISANKINAN’NY MPANAO GAZETY TENY ALASORA: Voandalan’ny taona 2021 ny karatra sy ny holafitra « Raha ny tsiliontsofina, hatsangan’ny tomponandraikitra tsy ho ela ny vaomiera misahana ny karatry ny mpanao gazety matianina. » Io no fampitam-baovao avy amin’i Soava Andriamarotafika, lohandohan’ny mpisorona namondrona ireo mpanao...
MEDIA 2021 : Une confédération des journalistes prévue à Madagascar Quatrième pouvoir ! Des informations officieuses circulent à Tsiadana, ce Samedi 12 Décembre. Une vision de confédération des journalistes Malagasy sera concrétisée cette année 2021. Selon des sources sures, à...
VONTOM-PITIA ANDIANY FAHA-2: Hotanterahana mandritra ny 7 andro ny hetsika amin’ity taona ity
Raha vao migadona tahaka izao ny volana febroary dia ao an-tsaina avy hatrany ny fetin’ny mpifankatia izay marihana isaky ny 14 febroary. Amin’ity taona 2021, nanomana hetsika goavana sy miavaka